Orinasa sy mpamatsy China Triclosan / TCS | Springchem
Anaran'ny vokatra:Triclosan / TCS
Anaran'ny marika:MOSV TS
Spektrum malalaka, mahomby, fiarovana ary tsy bakteria poizina. antibakteria ekena amin'ny ankapobeny misy vokany tsara.
Milamina: miorina amin'ny vahaolana avo lenta, asidra na alkaly, mampiseho tsy fanapoizinana ary tsy mitarika fahalotoan'ny tontolo iainana.
Fiarovana: Naverina natao tany ampitan-dranomasina fa tsy misy poizina mahery vaika sy poizina mitaiza, tsy nipoitra fahatsapana, hypersusceptibility, teratogenicity, carcinogenticity & photosensitization. tsy metabolized amin'ny alàlan'ny aty sy nephridium, azo antoka ary tsy misy atahorana na dia mihoatra ny 10% aza ny fatrany
Io fitambarana organika io dia vovo-vovoka fotsy misy fofona manitra sy fôlôlika kely. Voasokajy ho polychloro phenoxy phenol, ny triclosan dia vovo-kazo manitra voahosotra ary misy vondrona miasa misy solontena sy etôra. Ny phenol dia matetika mampiseho toetra mampiavaka ny bakteria. Ny triclosan dia mety levona amin'ny etanol, methanol, diethyl ether, ary vahaolana lehibe toy ny vahaolana 1 sodium hydroxide, fa ny rano kely ihany no mety levona. Ny triclosan dia azo amboarina amin'ny 2,4-dichlorophenol.
Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy tsara sy fotsy
fahadiovana 97.0 ~ 103.0%
Teboka mitsonika 55.5 ~ 57.5 ℃
Rano 0,1% Max
Residue amin'ny ignition 0,1% Max
Metaly mavesatra 0,002% Max
Fonosina amponga baoritra. 25kg / baoritra amponga miaraka amina kitapo anatiny PE (Φ36 × 46.5cm)
Ny triclosan dia azo ampiasaina ho anti-bakteria sy antiseptika amin'ny sehatry ny vokatra fikarakarana manokana na kosmetika.
Triclosan dia nampiasaina ho fikosehana hopitaly tamin'ny taona 1970. Nanomboka teo dia nitatra ara-barotra izy io ary ankehitriny dia fangaro mahazatra amin'ny savony (0,10-1,00%), shampoos, deodorants, nify, fanasana vava, kojakoja fanadiovana ary fanafody famonoana bibikely. Ity dia ampahany amin'ny vokatra mpanjifa, ao anatin'izany ny kojakojan-dakozia, kilalao, lambam-pandriana, ba kiraro ary kitapo fako. Voasokajy ho polychloro phenoxy phenol, ny triclosan dia vovo-kazo manitra voahosotra ary misy vondrona miasa misy solontena sy etôra. Ny phenol dia matetika mampiseho toetra mampiavaka ny bakteria. Ny triclosan dia mety levona amin'ny etanol, methanol, diethyl ether, ary vahaolana lehibe toy ny vahaolana 1 sodium hidroksida hydroxide, saingy tsy voavaha kely fotsiny ao anaty rano. Ny triclosan dia azo amboarina amin'ny 2,4-dichlorophenol.